Ngwa 10 nke ị gakwaghị mkpa na Windows 8.1 | Akụkọ akụrụngwa
Mmanya na-egbu egbu | | Aplicaciones, software, Windows
Windows 8 bụ sistemụ arụmọrụ Microsoft kachasị ọhụrụ, nke bụ enweghị afọ ojuju nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ n'ihi akụkụ dị iche iche na ihe ndị na-adịghị atọ ha ụtọ. Ma Ma ihe ị na-efu na Windows 8?
Ọ bụrụ na ị maghị, Windows 8 na-abịa na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa arụnyere na mbu, nke bu ihe kpatara iji (ntinye) nke ngwa oru nke anyi nwere ike iji na Windows 7 na nsụgharị ndi ozo gara aga agakwaghi adi nkpa na nke kachasi nso nke Microsoft choro. N'isiokwu a, anyị ga-ekwupụta ole na ole n'ime ngwaọrụ ndị a na ị gaghịzi achọ ịwụnye na sistemụ arụmọrụ gị.
1 1. Antivirus tinyere na Windows 8
2 2. Firewall ahụ
3 3. Nkebi manager
4 4. Ugwu ISO na IMG oyiyi
5 5. Ọkụ ọdịnaya na discs
6 6. Njikwa nke otutu monitors
7 7. Detuo faịlụ buru ibu
8 8. Ọgụgụ PDF faịlụ
9 9. Nkwado maka igwe mebere
10 10. Ihe oyiyi sistemụ
1. Antivirus tinyere na Windows 8
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị maka wụnye ụdị antivirus na nsụgharị tupu Windows 8Ugbu a, anyị nwere ozi ọma maka gị; Windows Defender bụ nchebe na Microsoft chọrọ natively, nke dịnụ maka Windows 7 n'okpuru aha nke Ihe Nchedo Nchedo Microsoft.
2. Firewall ahụ
Nke a na atụmatụ a na-wuru n'ime (mgbe ụfọdụ dị ka ihe tinye-na ọrụ) na sistemụ antivirus dị iche iche n'ahịa; site na Windows XP SP2 ọ dịghịzi mkpa iji wụnye Firewall na ọbụlagodi obere, na Windows 8, ebe a mma a mma maka nche na nzuzo nke ozi nke a sistemụ nrụọrụ.
3. Nkebi manager
Na Windows 8, nkebi manager ka mma immensely; onye ọrụ nwere ike imegharị draịvụ ike ha ma ọ bụ nkebi a kapịrị ọnụ, si otú a na-achọghị ngwa ndị ọzọ maka ụdị ọrụ a.
4. Ugwu ISO na IMG oyiyi
Y’oburu Windows 8 ma ịchọrọ ịlele ọdịnaya nke ụdị ụfọdụ nke ISO ma ọ bụ IMG disk, mgbe ahụ ị gaghị enwezi ịwụnye ngwaọrụ ndị ọzọ kama kama, jiri ọrụ ala Microsoft, ebe ọ bụ na nyocha a, bulie ihe oyiyi nke ụdị a dịka ọrụ ala.
5. Ọkụ ọdịnaya na discs
Ejirila ọrụ a kemgbe Windows 7, ọ dịghịkwa mkpa iji ngwa ndị ọzọ mgbe ị na-edekọ ọdịnaya na diski anụ ahụ, ọ bụrụ CD-ROM ma ọ bụ DVD; nwa afọ ngwá ọrụ pụrụ iji rewritable discs, jiri videos ike a DVD diski, audio CDD-ROM n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
6. Njikwa nke otutu monitors
Ọ bụ ezie na ọnọdụ a dịtụ mgbagwoju anya (na usoro njikwa) maka ọtụtụ mmadụ, ndị ojiji nke 2 ma ọ bụ karịa Monitors ga-ekwe omume na Windows 8 nwaafọ. Naanị ịgbalite ọrụ dị iche iche na voila, kọmputa anyị Windows 8 ọ nwere ike ịrụ ọrụ na ọtụtụ ntanetị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ.
7. Detuo faịlụ buru ibu
N'oge gara aga, a ghaghị ịrụ ọrụ a na Windows 7 na ngwaọrụ a na-akpọ Teracopy, nke bụ ihe ngwọta mgbe ị na-edegharị faịlụ buru ibu site n'otu ebe gaa na nke ọzọ.
Ugbu a Windows 8Na-enweghị iji ngwá ọrụ a (ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ), onye ọrụ nwere ike ịmegharị nnomi faịlụ a n'ụzọ dị mfe na ebe ọ bụla.
8. Ọgụgụ PDF faịlụ
Obi abụọ adịghị ya, nke a bụ uru ọzọ magburu onwe ya ọ na-enye anyị Windows 8; adịkwaghị mkpa ịwụnye Adobe Acrobat ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ yiri ka nwee ike gụọ akwụkwọ n'ụdị PDF,, ebe ọ bụ na sistemụ arụmọrụ a na-akwado ụdị ndị a.
9. Nkwado maka igwe mebere
Ọ bụ ezie na isiokwu a bit mgbagwoju aka, ma Windows 8 nwere na-ekwe omume nke jikwaa mebere igwe, atụmatụ ga - enyere anyị aka iulateomi sistemụ arụmọrụ ọ bụla n'ime Microsoft.
10. Ihe oyiyi sistemụ
Dị ka ọ dị na Windows 7, na Windows 8.1 onye ọrụ nwere ike ime ike ihe oyiyi nke gị dum sistemụ disk; Ekwesịrị ịkọwapụta na njirimara a adịghị na Windows 8.
Anyị ewepụtala oge ịkọwa 10 nke atụmatụ ndị kachasị mkpa sistemụ arụmọrụ na-enye anyị site na Microsoft, aro nke na-anwa ikwu na ọ dịkwaghị mkpa ịwụnye ngwa ndị ọzọ iji rụọ ọrụ na ụfọdụ ọrụ abanyela ugbu a Windows 8.
Ozi ndị ọzọ - Smart Nche: ESET Nche System, Antivirus kacha mma na 2012, TeraCopy - Detuo na mado faịlụ buru ibu, Acrobat: Mma nke Standardization, Foxit PDF Reader. Esi emeghe faịlụ na ndọtị PDF na-enweghị wụnye Adobe Reader, Gịnị bụ VHD mebere disk image?, Zọ dị mfe iji mepụta diski mebere na Windows
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » 10 Ngwa ị gaghị etinyezi na Windows 8